Tartanka Dhalinyarada ee Koobka Kubadda Cagta ee Nabadda. – Radio Daljir
Luulyo 2, 2010 12:00 b 0
Galkacyo, July 02 – Dhalinyaro ka kala timid Gaalkacyo iyo nawaaxigeeda ayaa Khamiistii July 01, 2010 isugu timid Xarunta Nabadda ee Dhalinyarada ee Magaalada Gaalkacyo si ay ugu ciyaaraan tartan kubad cag. Waa tartankii ugu horreeyey oo noocan oo kale ah oo lagu qabto.
Kulankan oo loogu magacdaray ?Tartanka Nabadda ee Dhalinyarada Gaalkacyo? waxaa soo abaabulay urur haween oo maxalli ah oo la yiraahdo ?Xarunta Waxbarashada, Nabadda iyo Horumarinta Gaalkacyo – GECPD? iyagoo ku beegaya Xuska Maalinta Xorriyada ee Soomaaliya. Kulankani wuxuu isu keenay dhalinyarada Koonfurta iyo Waqooyiga Gaalkacyo iyadoo laga faa?iideysanayo xaruntan cusub.
Sidoo kale waxaa tartankan ka soo qaybgalay Guddoomiye ku xigeenka gobolka Mudug Bashiir Max?ed Mire iyo Duqa Degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Max?ud X. Xasan.
Isagoo la hadlaya ka so qaybgalayaashii munaasabadda, guddoomiye ku xigeenka gobolku dhalinyarada ku boorriyey inay kartidooda iyo xirfaddooda ka faa?iideystaan iyagoo ku dadaalaya ciyaaraha (sports) iskana ilaaliniya ama hilmaamaya iska soo horjeedka bulshada dhexdeeda ka jira. Sidoo kale wuxuu GECPD ugu hambalyeeyey dadaaladeeda ay ku dhaqaale ururisey si looga faa?iideysto Xarunta Nabadda ee Dhalinyarada. Guddoomiyuhu wuxuu xusay in xaruntani ay in badan ka caawin doonto horumarinta iyo kobcinta kartida dhalinyarada.
Duqa degmadu wuxuu ballanqaaday inay dawladdu taageeri doonto waxqabadyada dhalinyarada ee Gaalkacyo. Duqu wuxuu xusey in ka qaybgalinta dhalinyarada ee dhammaan waxqabadyada dhinacyada nolosha sida ciyaaraha ay tahay xeeladda ugu wanaagsan ee in dib loogu mideyn karo bulshada isla markaasna nabadda lagu soo clin karo. Duqu wuxuu yiri ?qabashada xuska maalinta xorriyada Soomaaliyeed, waxay arrin xusuusinaysa bulshooyinka danahooda caamka ah ee wadaagaan, sababtaas darteedna loo baahan yahay in la dhiso nabad qaarta iyo nolol ku dhisan is jacayl dadkoo dhan midba kan kale jecel yahay.
Kormeeraha barnaamijyada ee GECPD Xaawo Yuusuf Axmed waxay u mahad celisey dhammaan dadkii ka qayb qaatay qabashada kulankan, waxa kale oo tiri dhammaan dhalinyarada waxaan ku soo dhawaynaynaa xaruntan cusub. Dhamman dhalinyarada waxay ku dhiirrigelisey inay sii wadaan sidii ay iskood iskugu abaabuli lahaayeen isla markaasna u samaysan lahaayeen naadiyaal, kana doodaan sidii ay kartidooda iyo xirfadahooda dhalinyaro ay si buuxda ugu faa?iideysaan marka la dhammaystiro dhismaha xaruntan.
Tartarkan waxaa isaga hor yimid labada kooxood ee Kooxda kubadda Cagta ee Homboboro iyo Kooxda kubadda Cagta ee Dawladda hoose ee Gaalkacyo. Homboboro ayaa ayaa kooxdii dawladda Hoose mataleysay uga guuleysatey 3:0. Kooxdii guuleysatey waxay heshay koobkii, abaal marin lacageedna labada kooxoodba waa la siiyey. Tani waxay ahayd kulankii ugu horreeyey ee xarunta lagu qabto, xaruntaasoo adeegyadeeda kale ay ka mid noqon doonaan garoomada kubadda koleyga, kubadda shaqaba (gacanta), Laybareeri, Hoolka dadweynaha, qolka shirarka, goob cuntada iyo cabitaanka fudud (canteen) iyo Masaajid.